येशूको जन्मको चमत्कार - भगवान स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च
भगवान > छोरा > येशूको जन्मको चमत्कार
"के तपाई त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ?" पर्यटकले मलाई ल्याटिन शिलालेख भएको ठूलो चाँदीको तारा औंल्याउँदै मलाई सोध्यो: "हिक दे वर्जिन मारिया जीसस क्रिस्टस नाटस एस्ट।" मेरो पातलो ल्याटिनको पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर अनुवाद गर्ने प्रयास गर्दै मैले जवाफ दिएँ, "म गर्नेछु": कुमारी मरियमले येशूलाई जन्म दिएको ठाउँ यही हो। " "ठिक छ, तिमीलाई के लाग्छ?" त्यस मानिसले सोध्यो। "के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ?"
यो पवित्र भूमिको लागि मेरो पहिलो भ्रमण थियो र म बेथलेहेमको जन्म चर्चको ग्रोटोमा उभिरहेको थिएँ। गढीजस्तो चर्च अफ नेभटिइ यस गुंठो वा गुफामा बनेको छ, जहाँ परम्परा अनुसार येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थियो। एक चाँदीको तारा, जुन संगमरमरको भुइँमा सेट गरिएको छ, ईश्वरीय जन्म भएको ठाउँमा ठ्याक्कै बिन्दु हो। मैले जवाफ दिएँ, "हो, म विश्वास गर्छु कि येशूलाई आश्चर्यजनक रूपमा [मरियमको काखमा] स्वागत गरिएको थियो", तर मैले चाँदीको ताराको जन्मको ठीक ठाउँमा चिह्न लगाएको हो भनेर शंका गरे। एक जना अज्ञेयवादीले विश्वास गरे कि येशू विवाहबाट जन्मनुभएको हुन सक्छ र कुमारी जन्मको बारेमा सुसमाचारका पुस्तकहरूले यस अप्ठ्यारो तथ्यलाई ढाक्न खोजेका थिए। उनले अनुमान गरे कि सुसमाचारका लेखकहरूले पुरातन मूर्तिपूजक पौराणिक कथाबाट अलौकिक जन्मको विषय लिएको छ। पछि, जब हामी पुरानो चर्च बाहिर चर्को वर्गको काफल्ड क्षेत्रको वरिपरि घुम्न गयौं, हामीले यस विषयलाई अझ गहिराईमा छलफल गर्‍यौं।
प्रारम्भिक बचपनको कथाहरू
मैले वर्णन गरें कि "कुमारी जन्म" भन्ने शव्दले येशूको वास्तविक अवधारणालाई जनाउँदछ; यही हो, जुन विश्वास येशू मरियममा पवित्र आत्माको अचम्मको कामबाट प्राप्त भयो, कुनै मानव पिताको प्रभावबिना। मरियम येशूको एउटै मात्र स्वाभाविक अभिभावक हो भन्ने शिक्षा नयाँ नियमका दुई खण्डहरूमा स्पष्टसँग सिकाइएको छ: मत्ती १.१ 1,18.-२25 र लूका १.२ .--1,26। तिनीहरूले येशूको अलौकिक अवधारणालाई ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा वर्णन गर्छन्। मत्ती हामीलाई भन्छन्:
"तर येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकार भयो: जब उनकी आमा मरियम, जोसेफलाई विश्वास गरिन् [उनीसँग घर ल्याउनु भन्दा पहिले, यो थाहा भयो कि उनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती थिइन् ... तर सबै कुरा यस्तो भयो कि प्रभुले अगमवक्ता मार्फत भन्नुभएको कुरा पूरा हुनेछ, जसले यसो भने: "हेर, एक कुमारी बच्चा संग हुनेछन् र एउटा छोरा जन्माउनेछन्, र उनीहरुले उसको नाम इम्मानुएल राख्नेछन्", जसको अर्थ हो, अनुवादमा: भगवान हाम्रो साथ "(मत्ती १ : १।। २२-२३)।
लूकाले कुमारी जन्मको स्वर्गदूतको घोषणामा मरियमको प्रतिक्रियाको वर्णन गरे: «तब मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्: यो कसरी हुनसक्छ, किनकि मँ कसैको बारेमा थाहा छैन? स्वर्गदूतले जवाफ दिए र तिनलाई भने, पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, र सर्वोच्चको शक्तिले तिमीलाई छाया दिनेछ; यसैले जन्मेको पवित्र चीजलाई परमेश्वरको पुत्र पनि भनिन्छ (लूका १: ३४-३५)।
प्रत्येक लेखकले कथालाई फरक ढंगले व्यवहार गर्दछन्। मत्तीको सुसमाचार यहूदी पाठकहरूको लागि लेखिएको थियो र मसीहको पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरूको पूर्तिसँग सम्बन्धित थियो। अन्यजातिका मसीही लूकाले लेख्दा ग्रीक र रोमी संसारको दिमागमा थियो। उहाँसँग धेरै विश्वव्यापी दर्शकहरू थिए - प्यालेस्टाइन बाहिरका मूर्तिपूजक मूलका ईसाईहरू।
आउनुहोस् हामी फेरि मत्तीको विवरणलाई ध्यान दिऔं: "येशू ख्रीष्टको जन्म निम्नानुसार भयो: जब मरियम, उनकी आमा, जोसेफलाई विश्वास [विश्वासघात] गरिएको थियो, यो थाहा भयो, उनी घर ल्याउनु अघि, कि उनी पवित्र आत्मा संग थिइन्। "(मत्ती १:१)। मत्ती यूसुफ को दृष्टिकोण बाट कथा बताउँछ। जोसेफले गोप्य रूपमा सगाई तोड्ने विचार गरे। तर एक स्वर्गदूत यूसुफलाई देखा परे र उसलाई आश्वासन दिए: «यूसुफ, दाऊदका छोरा, तिम्री श्रीमती मरियमलाई तिम्रो घरमा ल्याउन नडराऊ; के उनले पवित्र आत्मा बाट प्राप्त गरीन् (मत्ती १:२०)। यूसुफले ईश्वरीय योजना स्वीकार गरे।
येशू आफ्ना मसीह हुनुहुन्थ्यो भनी आफ्ना यहूदी पाठकहरुको प्रमाणको रूपमा, म्याथ्यु यसो भन्छन्: "यो सब यसकारण गरिएको हो कि प्रभुले अगमवक्ताको माध्यम बाट भन्नुभएको छ, जसले यसो भन्नुभयो:" हेर, एक कुमारी बच्चा संग हुनेछ र एउटा बच्चालाई जन्म दिईनेछ। छोरा र उनीहरुले उसलाई इम्मानुएल नाम दिनेछन् "जसको अर्थ हो, अनुवादित: भगवान हाम्रो साथ" (मत्ती १: २२-२३)। यो यशैया 1,22:23 लाई बुझाउँछ।
महिलाहरु को भूमिका को लागी उनको विशेषता ध्यान संग, ल्यूक मैरी को दृष्टिकोण बाट कथा बताउँछ। लूकाको विवरणमा हामी पढ्छौं कि परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूत मरियमलाई नासरतमा पठाउनुभयो। गब्रिएलले उसलाई भने: "नडराऊ, मारिया, तिमीले भगवानको अनुग्रह पाएका छौ। हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरालाई जन्म दिनेछौ, र तिमीले उसको नाम येशू राख्नु पर्छ »(लूका १: ३०-३१)।
त्यो कसरी हुन सक्छ? गेब्रियलले उसलाई बुझाए कि यो एक सामान्य अवधारणा हुनेछैन: «पवित्र आत्मा तिमी मा आउनुहुनेछ र सर्वोच्च को शक्ति तिमीलाई छाया दिनेछ; यसैले जन्मेको पवित्र चीजलाई परमेश्वरको पुत्र पनि भनिनेछ (लूका १:३५)।
यदि उनको गर्भावस्था पक्कै पनि गलत बुझिनेछ र उनको प्रतिष्ठा जोखिममा छ, मरियम साहसपूर्वक असाधारण स्थिति स्वीकारे: "हेर, म प्रभुको दासी हुँ" उनले चिच्याए। "तिमीले भनेझैं यो मेरो लागी हुन सक्छ" (लूका १:३1,38)। एक चमत्कार द्वारा, भगवान को पुत्र अन्तरिक्ष र समय मा प्रवेश गरीयो र एक मानव भ्रूण बन्यो।
शब्द शरीर भयो
कन्या जन्ममा विश्वास गर्नेहरु सामान्यतया स्वीकार गर्छन् कि येशू हाम्रो मुक्ति को लागी मानिस बन्नुभयो। जो कुमारी जन्म स्वीकार गर्दैनन् उनीहरु नासरत को येशू लाई एक मानव को रूप मा बुझ्छन् - र केवल एक मानव को रूप मा। कुमारी जन्म को सिद्धान्त सीधा अवतार को सिद्धान्त संग सम्बन्धित छ, यद्यपि यो समान छैन। अवतार (अवतार, शाब्दिक रूप मा "अवतार") यो सिद्धान्त हो कि भगवान को शाश्वत पुत्र आफ्नो देवीत्व मा मानव मासु जोड्नुभयो र एक मानव बन्नुभएको सिद्धान्त हो। यो विश्वास यूहन्ना को सुसमाचार को प्रस्तावना मा यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति पाउँछ: "र शब्द मासु बनेको थियो र हामी बीचमा बास" (यूहन्ना १:१४)।
कुमारी जन्मको शिक्षाले भन्छ कि गर्भधारण गर्‍यो येशूमा कुनै चमत्कारपूर्ण ढंगमा मानव बुबा नहुनु भयो। अवतारले भन्छ कि परमेश्वर शरीर हुनुभयो; कुमारी जन्मले कसरी बताउँछ। अवतार एक अलौकिक घटना थियो र जन्मको एक विशेष प्रकारको थियो। यदि बच्चा जन्म लिने मानिस मात्र हुँदो हो त अलौकिक अवधारणाको आवश्यकता पर्ने थिएन। उदाहरणका लागि पहिलो मानिस आदम पनि अचम्मलाग्दो तरिकाले परमेश्वरको हातले बनाएका थिए। उसको कुनै बाबु वा आमा थिएनन्। तर आदम परमेश्वर थिएनन्। भगवानले अलौकिक कुमारी जन्मबाट मानवतामा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
हामीले हेरेका थियौं कि मत्ती र लूकाको खण्डहरूको शब्द स्पष्ट छ: मरियम कुमारी थिइन जब येशू पवित्र आत्माले उनलाई शरीरमा ग्रहण गर्नुभयो। यो भगवानबाट एउटा चमत्कार थियो। तर उदार धर्मशास्त्रको आगमनको साथ - अलौकिक सबै कुराको सामान्य शंकाको साथ - यी बाइबलीय भनाइहरू विभिन्न कारणका लागि प्रश्न गरिएका थिए। ती मध्ये एक हो येशूको जन्म को विवरण मा लेट मूल हो। यस सिद्धान्तले तर्क गर्दछ कि प्रारम्भिक इसाई विश्वास स्थापना भएपछि, इसाईहरूले येशूको जीवनको कथनमा काल्पनिक तत्वहरू थप्न थाले। भनिन्छ, यो कुमारी जन्म भनेको येशू मानवजातिलाई परमेश्‍वरको वरदान हो भनेर व्यक्त गर्ने तिनीहरूको कल्पनाशक्ति मात्र थियो।
येशू तथा प्रचारकहरूको वचनलाई भोट गर्ने उदार बाइबल विद्वानहरूको एउटा समूह, येशू सेमिनारले यो दृष्टिकोण राख्छ। यी धर्मविद्हरूले येशूको अलौकिक अवधारणा र जन्मको बाइबलीय विवरणलाई "पछि सृष्टि" भनेर सम्बोधन गर्छन्। मारिया, उनीहरू भन्छन, जोसेफ वा अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध हुनुपर्दछ।
के नयाँ नियमका लेखकहरूले येशू ख्रीष्टलाई जानाजानी ठूलो बनाएर मिथ्याहरूमा संलग्न भए? के उहाँ केवल "मानव भविष्यवक्ता", एक "आफ्नो समयका साधारण मानिस" हुनुहुन्थ्यो, जसलाई पछि विश्‍वासी अनुयायीहरूले "उनीहरूको क्रिस्टोलोजिकल कट्टरपन्थी समर्थन" गर्न अलौकिक आभाले सजाए?
त्यस्ता सिद्धान्तहरू धान्न असम्भव छ। म्याथियस र लुकासबाट दुई जन्म रिपोर्टहरू - उनीहरूको बिभिन्न सामग्री र दृष्टिकोणबाट - एक अर्काबाट स्वतन्त्र छन्। वास्तवमा, येशूको अवधारणाको आश्चर्यकर्म तिनीहरू बीच एक मात्र साझा बिन्दु हो। यसले संकेत गर्दछ कि कुमारी जन्म जन्म, पहिलेको ज्ञात परम्परामा आधारित छ, पछि ईश्वरशास्त्रीय विस्तार वा सैद्धान्तिक विकासमा होइन।
के चमत्कारहरू मिति सकिसकेका छन्?
प्रारम्भिक चर्चले यसलाई व्यापक रूपमा मान्यता दिए पनि, कुमारीको जन्म धेरै आधुनिक संस्कृतिहरूमा, हाम्रो मसीही संस्कृतिमा समेत केही इसाईहरूको लागि गाह्रो अवधारणा हो। धेरै व्यक्तिहरूको विचारमा अलौकिक अवधारणाको सोच अन्धविश्वासको गन्ध आउँछ। उनीहरू दाबी गर्छन् कि कुमारी कुमारी नयाँ करारको छेउमा एउटा महत्वहीन शिक्षा हो जसको सुसमाचारको सन्देशको लागि खास अर्थ छैन।
Skeptics अलौकिक को अस्वीकृति एक तर्कसंगत र मानवीय विश्वदृष्टि संग मिल्दो छ। तर एक इसाईका लागि, येशू ख्रीष्टको जन्मबाट अलौकिक चीजलाई हटाउनु भनेको यसको ईश्वरीय उत्पत्ति र मौलिक अर्थमा सम्झौता गर्नु हो। यदि हामी येशू ख्रीष्टको परमात्मा र मृत्युबाट उसको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छौं भने किन कुमारीको जन्मलाई अस्वीकार गर्ने? यदि हामी अलौकिक निकास [पुनरुत्थान र आरोहण] लाई अनुमति दिन्छौं भने, संसारमा अलौकिक प्रवेश किन होइन? सम्झौता वा कन्या जन्म अस्वीकार आफ्नो मान र अर्थ को अन्य सिद्धान्तहरु लुटे। हामी इसाईको रूपमा विश्वास गर्नेका लागि हाम्रो कुनै जग वा अधिकार बाँकी छैन।
भगवान आफैंलाई संसारमा सम्मिलित गर्नुहुन्छ, उनी सक्रिय रूपमा मानव मामिलामा हस्तक्षेप गर्दछन्, यदि आवश्यक छ भने प्राकृतिक कानूनहरु लाई उन्मुक्ति दिन को लागी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी - र उनी एक कुमारी जन्म को माध्यम बाट मासु बने। जब भगवान येशू को ब्यक्ति मा मानव शरीर मा आउनुभयो, उहाँले आफ्नो देवत्व त्याग्नु भएन, बरु उनको ईश्वरत्व मा मानवता लाई जोड्नुभयो। उहाँ दुवै पूर्णतया परमेश्वर र पूर्ण मानव हुनुहुन्थ्यो (फिलिप्पी २: -2,6--8; कलस्सी १: १५-२०; हिब्रू १: -1,15-))।
येशूको अलौकिक उत्पत्ति उहाँलाई बाँकी मानवता बाट अलग राख्छ। उनको अवधारणा प्रकृति को नियमहरु को लागी एक भगवान द्वारा निर्धारित अपवाद थियो। कुमारी जन्मले देखाउँछ कि परमेश्वरको पुत्र हाम्रो मुक्तिदाता बन्न को लागी तयार हुनुहुन्थ्यो। यो परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेम को एक अद्भुत प्रदर्शन थियो (जोन ३:१)) आफ्नो मुक्तिको प्रतिज्ञा पूरा गर्न मा।
परमेश्वरको पुत्र हामी मध्ये एक बन्यौं मानवता को प्रकृति को अंगीकार गरेर हामीलाई बचाउन को लागी कि उहाँ हाम्रो लागी मर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ शरीरमा आउनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरु मुक्त, मेलमिलाप र बचाउन सकून् (१ तिमोथी १:१५)। केवल एक जो भगवान र मानिस थियो मानव जाति को पाप को लागी जबरदस्त मूल्य तिर्न सक्छ।
जसरी पावल व्याख्या गर्दछन्: "जब समय पूरा भयो, भगवानले आफ्नो छोरालाई पठाउनुभयो, एक महिलाबाट जन्मेको र कानूनको अधीनमा राखियो, ताकि उनीहरु कानूनको अधीनमा रहेकाहरुलाई मुक्त गर्न सकून्, ताकि हामी बच्चाहरु हुन सक्छौं (गलाती ४: ४-५) । येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार्ने र उहाँको नाममा विश्वास गर्नेहरुलाई भगवानले मोक्षको अमूल्य उपहार प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई उहाँ संग एक व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रदान गर्दछ। हामी भगवान को छोरा र छोरी बन्न सक्छौं - "रगत बाट जन्मेका बच्चाहरु, न शरीर को इच्छा न मानिस को इच्छा बाट, तर भगवान बाट" (जोन १:१३)।